Monday December 16, 2019 - 07:20:45 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka u dhaxeeya xukuumadaha Washington iyo Anqara ayuu madaxweynaha Turkiga ku handaday in uu xiri doono saldhigyo Melleteri oo Mareykanku ku leeyahay wadankiisa.
Rajib Erdogaan ayaa sheegay in haddii dowladda Mareykanka ay cunaqabateymo dheeraad ah kusoo rogto dowladdiisa uu albaabada isugu laabi doono saldhigyada melleteri ee kala ah Incirlik iyo Kurajek oo ay ku suganyihiin boqolaal askari American ah.
Khudbad uu ka jeediyay Telefeshinka ku hadla Afka dowladda Turkiga ayuu ku sheegay in uu tallaab adag qaadan doono haddii maamulka Trump uu ku dhiirado in uu xayiraado dheeraad ah kusoo rogo dowladdiisa.
Erdogaan ma sheegin in go'aan uu ku gaaray xiridda saldhigga Incirlik oo larumeysanyahay in uu yaal hubka wax gummaada ee Niyugleerka islamarkaana uu yahay halka Mareykanka uu uga jiro difaaca ka dhanka ah Ruushka iyo xulufadiisa.
Sidoo kale saldhigga Kurajek waxaa ku sugan kumanaan katirsan ciidamada Ururka NATO haddii Turkigu xirana waxay ka dhignaan doontaa in isbahaysigan iyo Turkiga ay dhabarka isku jeediyeen.
Dhowr mar ayuu Donald Trump ku dhawaaqay cunaqabateymo ka dhan ah dowladda Turkiga balse goor dambe ayuu ka laabtay cunaqabateymahaas, waxaa xusid mudan in Turkiga iyo Mareykanka ay iskula jiraan isbahaysiga NATO islamarkaana ay ku midaysanyihiin dagaalka ka dhanka ah waxa loogu yeero Argagaxisada oo loola jeedo jamaacaadka jihaadiga ah